#Somaliland: Dufcadii U Horaysay Dhalinyaro Waxbarasho Loogu Diray Dalka #Taiwan - #1Araweelo News Network
#Somaliland: Dufcadii U Horaysay Dhalinyaro Waxbarasho Loogu Diray Dalka #Taiwan
Hargeysa(ANN)-Qasriga Madaxtooyadda Somaliland, ayaa maanta lagu qabtay munaasibad sagootis ah oo dalka Taiwan loogu gelbinayay dhalinyaro deeq waxbarasho ka heshay dalkaa, kuwaas oo si toos ah uga anbaxabay dalkooda si ay uga faa’idaystaan deeqda waxbarasho.
Munaasibada loo qabtay dhalinyaradaa, ayaa ahayd mid Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ku sagootinayay kooxda dhlinyarada ah oo ahaa 33 (Saddex iyo soddon).
Qoraal kasoo baxay qasriga Madaxtooyadda Somaliland oo nuqul ka mid ah soo gaadhay shebekaddaha Araweelo News Network, ayaa lagu sheegay in kooxda dhalinyarada ah ee munaasibada sagootiska ah loo sameeyay ahaayeen Arday oo ku guulaystay tartan loo galay deeqda waxbarasho ee dalka Taiwan siiyey Jamhuuriyadda Somaliland.
Sida lagu xusay qoraalka Kulankan sagootiska ah ee ka qabsoomay qasriga madaxtooyada, waxa madaxweynaha kala qaybgalay xubno kamid ah gollaha wasiirrada, madaxa guddida tacliinta sare ee Somaliland, safiirrada Somaliland iyo Taiwan u kala fadhiya labada dal, Ardayda ku guulaysatay deeqda waxbarasho iyo waalidiintooda, waxaana laga jeediyay hadallo dardaaran iyo dhiirigelin ah oo ku waajahnaa Ardayda.
Safiirka Taiwan u qaabilsan dalka Jamhuuriyadda Somaliland, Amb. Allen Chenhwa Lou oo halkaas ka hadlay, ayaa ku dheeraaday xidhiidhka qotoda dheer ee ka dhexeeya Somaliland iyo Taiwan iyo qiimaha ay leedahay deeqda waxbarasho ee Ardaydan la siiyey, waxana uu kula dardaarmay xubnaha guulaystay inay ka faa’iidaystaan fursaddaas la siiyay oo aannay dayicin.
Gebagebadii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxa uu madasha ka ballan qaaday inay xukuumaddu tigidhada diyaaradaha ka bixinayso Ardayda qayb ahaan iska bixinaysa deeqda waxbarasho, waxana uu yidhi,“Dhammaan Ardayda deeqda waxbarasho qayb ahaan iska bixinaysa (Partially scholarship) tigidhadooda dawladda ayaa ka bixinaysa.”Madaxweyne Biixi.